Shariif Xasan oo kulan qarsoodi ah kula yeeshay Adis Ababa Milas Zanawi iyo Faroole | KEYDMEDIA ONLINE
Shariif Xasan oo kulan qarsoodi ah kula yeeshay Adis Ababa Milas Zanawi iyo Faroole
Adis Ababa (Keydmedia) - Waraka keydmedia ay kaheleyso xafiiska gudoomiyaha Baarlamaanka KMG Soomaaliya ayaa waxa ay xaqiijinayaan in Shariif Xasan uu kulan qarsoodi ah caasimada Ethoipia uu kula yeeshay rasilwasaraha dalkaasi, Milas Zanawi, iyo Faroole, hogaamiyaha maamulka Bari.
Ilaha wararkaan aan kaheleyno ayaa waxa ay sheegayaan in kulankaasi uu dhacay kadib markii Shariif Xasan iyo C/raxmaan Maxmuud faroole, hogaamiyaha maamulka Bari ay casuumaad kaheleen Milas Zanaawi.
Kulanka oo uu soo abaabulay Milas Zanaawi, oo arimaha Soomaaliya si toos ah iyo si dadbanba faraha kula jira, ayaa waxa uu ahaa mid labada nin loogu sheegayay wada shaqeyn ay mustaqbalka ka wada yeelanayaan hogaanka dalka Soomaaliya kadib marka uu soo idlaado waqtiga Madaxweyne Shariif uu xilka heynayo.
Milas ayaa intii uu socday kulanku waxa uu u balan qaaday Shariif Xasan in baarlamaanku ay dib u soo dooranayaan isaga marka lagaaro xilliga ladooranayo gudomiyaha baarlamaanka iyada oo kadibna baarlamaanka isagu uu gudomiyaha ka yahay ay madaxweyne u dooran doonaan Faroole wixii xilligaa ka danbeyana uu rasilwasaare u magacaabayo Faroole nin kasocda kooxda Ahlusunna Waljameeca oo lasheego in Ethiopia markii horaba ay soo aas aastay.
Si kastaba lama oga sida uu u dhaqan gelayo balan qaadaka Milas uu u sameeyay Faloole iyo shariif Xasan, hasa yeeshee waxaa Dadka indha indheeya Siyasada Shariif Xasan ay sheegayan in uu luuq waliba u gelayo sidii uu ugu waari lahaa siyasada Soomaaliya.